Darpan Nepal – कर्मचारीको मेन्टल हेल्थ कर्मचारी र कार्यालयले के गर्ने ?
कर्मचारीको मेन्टल हेल्थ कर्मचारी र कार्यालयले के गर्ने ?
Apr 17, 2018Admin12News0Like
आदर्श प्रधान, मनोविद!!विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिस स्वस्थ हुनका लागि शारीरिक रूपमा रोग नलागेको भएर मात्र पुग्दैन । शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन जरुरी छ । हामीले शारीरिक समस्यालाई अलि बढी जोड दिइरहेका हुन्छौँ ।
शारीरिकभन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्यले जीवनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । किनभने, मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिसले मात्र क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छ । र, जीवनमा आइपर्ने चुनौतीलाई सहज रूपमा सामना गर्न सक्छ ।
कर्मचारीमा मानसिक समस्या दैनिकी सञ्चालनका लागि कार्यक्षेत्रमा बिताउने समय महत्वपूर्ण हुन्छ । जसका लागि मानिसले परिवारलाई भन्दा बढी समय दिएको हुन्छ । त्यस्तो ठाउँको वातावरणले व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीको ठूलो संख्यामा डिप्रेसन, एन्जाइटी, तनावजस्ता मानसिक समस्या रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, बाइपोलार डिसअर्डर, प्यानिक अट्याक डिसअर्डर र पर्सनालिटी डिसअर्डरजस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् ।
शरीरमा शिथिलता, अनिद्रा, मुडमा असन्तुलन, विनाकारण डर, मनमा नकारात्मक कुरा खेल्नेजस्ता समस्या पनि देखिएको छ ।
कर्मचारीमा अत्यधिक थकान, कार्यालयमा नियमित अनुपस्थिति, इच्छाशक्तिको अभाव, कार्यक्षेत्रमा झगडा, उत्प्रेरणाको अभाव, आत्मबलमा कमी, डर आदि समस्या पनि हुन सक्छ । यस्तो समस्या कसैलाई भन्न नसक्ने र उपचारको खोजी पनि नगर्दा आत्महत्याको सोचसमेत बिस्तारै आउन थाल्छ ।
कर्मचारीको मानसिक अवस्था सबल नहुँदा उनीहरूको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने गर्छ । कामप्रतिको लगावमा कमी आउने हुँदा जागिर नै छोड्ने गरेको पाइन्छ ।
कर्मचारीमैत्री वातावरणको अभाव
अमिल्दो कार्यालय समय
कर्मचारीहरूबीच गरिने असमान व्यवहार
व्यवस्थापकबाट धम्की एवं मनोवैज्ञानिक दबाब
कर्मचारी र कार्यालयले के गर्ने ?
रिसर्चले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, समस्या बुझिदिने, क्षमताअनुसारको पुरस्कार, बढुवालगायतका गतिविधि गर्दा कर्मचारी सबैभन्दा बढी सफल भएको देखिन्छ । त्यसैले समय–समयमा व्यक्तित्व विकास, तनाव व्यवस्थापनजस्ता तालिमको पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा राम्रो हुन्छ । जसले कर्मचारीको आत्मबल बढ्नका लागि सघाउ मिल्छ ।
कार्यक्षेत्र र निजी जीवनबीच सन्तुलन
मानसिक स्वास्थ्यका लागि कार्यक्षेत्र र आफ्नो निजी जीवनबीच सन्तुलन मिलाउन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । कामले निजी जीवनलाई र निजी जीवनको कामलाई असर पार्नु हुँदैन । कार्यालयले व्यवस्थापन टिमले कर्मचारीलाई शारीरिक, मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनका लागि सोच्न जरुरी हुन्छ ।
स्वस्थ जीवनशैलीका लागि शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित भोजन, सकारात्मक सोचलाई दैनिकीसँग जोड्नुपर्छ । मद्यपान, धूम्रपान, सुर्ती, लागुपदार्थजस्ता चिजहरूबाट दूरी बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान, प्राणायाम, विश्रामको अभ्यास नियमित गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, वेला–वेलामा परिवारसँग घुम्न निस्कँदा पनि स्फूर्ति महसुस हुन्छ । यसो गर्दा कर्मचारी र संस्था दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बन्न पुग्छ । फलस्वरूप कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि भई कम्पनीको नाफामा बढोत्तरी हुन सघाउ पुग्छ । मानसिक समस्या भई नै सकेको छ र आफूले सामना गर्न नसकी दैनिक जीवनमा समेत असर पुगेको छ भने मनोविमर्शकर्तासँग सल्लाह लिनुका साथै मनोचिकित्सकसँग स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जरुरी छ ।
मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिने
कार्यालयले कर्मचारीको मनोविज्ञान बुझेर जिम्मेवारी दिन आवश्यक हुन्छ । सबै कर्मचारी एकै प्रकारका नहुने भएकाले सबैबाट समान परिणामको आशा राख्नु पनि हुँदैन । कर्मचारीबाट अधिकतम लाभ उठाउनका लागि उसको मानसिक स्वास्थ्यको उचित ख्याल राख्नुपर्छ । कार्यालयले मुनाफा र खर्चको कटौती गरेर भए पनि कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यबारे विचार पुर्याउनुपर्छ ।
Previous Postकिन हुन्छ बालबालिकालाई परीक्षामा डर ?तल पढ्न्नुहोस। Next Postचिया पिउनुभन्दा पहिले यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्